Zavaboary Info. About. What's This?
Ny olombelona dia karazana biby hominide mandeha aminny tongotra roa. Ny olombelona dia malaza aminny fahakinganny sainy, ny fomba amam-panaony, ny fiteniny, ary ny fandrindrany ny tontolo iainany. Ny olombelon dia zavaboary miavaka aminny rehetra noho ny fananany saina handinika, vatana itoranny hery ary ny fananany fanahy hahafantarana ny tsara sy ny ratsy nany tokony hatao sy ny tsy tokony hatao eo aminny fiainany.
Ny teny hoe serafima dia avy aminny teny hebreo hoe שְׂרָפִים / serafim izay endrika milaza maronny teny hoe שָׂרָף / śārāf izay avy aminny matoanteny hebreo hoe saraf izay midika hoe "mirehitra" na "mandoro". Io teny hebreo serafim io dia midika ara-bakiteny hoe "ireo mirehitra" na "ireo mandoro". Ny hevitry ny teny hoe seraf hafa mety ho marina koa dia "miteraka fanaintainana" na "misy poizina" sahala aminny hita ao aminny Bokinny Deoteronomia indrindra ny Deo. 8.15: 10 Ary rehefa nihinana ianao ka voky ary misaotra ani Jehovah Andriamanitrao noho ny tany soa izay nomeny anao, 11 dia mit ...
Ny Famoronana dia ilay asan Andriamanitra tamin ny alalan ny teniny nampisy izao rehetra izao tany am-boalohany. Tantara miendrika angano ao amin ny bokim-pivavahan ny Jodaisma sy ny Kristianisma izany, dia ny Bokin ny Genesisy. Ny Bokin ny Genesisy dia maneho fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao avy taminny tsy misy, ka nametraka ny olona ho tampon ny asa famoronana nataony. Ao aminny Bokin ny Salamo dia voalaza fa nandahatra sy nandamina an izao tontolo izao Andriamanitra ka nampisy fifandraisana mivantana eo amin ny zavaboary rehetra. Indroa miantoana ny tantaran ny Famoronana ...
Ny paradisa dia toeranam-pahasambarana ahitana ny fahamaroanny zavatra tsara tsy mety lany sady lavitra ny fijaliana ka handraisana ireo olona tsy nivadika aminny finoany. Ao aminireo fivavahana abrahamika dia ny saha Edena no paradisa nametrahanAndriamanitra ny olombelona voalohany, dia i Adama sy i Eva. Ny fahotanireo olombelona ireo no niteraka ny fahaverezanny toetrilay paradisa ka nahatonga ny fiovanny fifandraisana eo aminny olona samy olona sy eo aminny olona sy ny zavaboary hafa ary eo aminny olona sy Andriamanitra ho lasa ratsy. Ny paradisa tahaka ny endriny voalohany no antenainn ...
Ny jiny dia zavaboary ara-pinoana teo aminny Arabo tany aloha ary mbola inoana fisiana ao aminny fivavahana silamo ankehitriny. Tsy hita maso ny jiny aminny ankapobeny nefa tsy fanahy tanteraka satria afaka miseho aminny endrika zavamaniry na biby na olona sady mety hahatsapa te hatory na noana. Afaka mibaiko ny fanahy na ny sainny olombelona ny jiny nefa tsy voatery hampiasainy izany hery ananany izany. Aminny finoana silamo, ny jiny dia manan-tsafidy hanao ny tsara na ny ratsy toy ny olombelona, tsy tahaka ny anjely izay tsy afaka manao afa-tsy ny tsara ihany.
Ny zavaboary dia tontolo tsy nokasihanny olombelona. Ny teny mifanohitra aminny teny "zavaboary" dia "tontolo namboarina", izany hoe tontolo namboarinny olombelona toy ny saha, ny trano na ny tanàna.
Ho anny olona vitsivitsy, misy hasarotana eo aminny teny "ara-javaboary", satria ny zavaboary dia matetika voakasiky ny hetsikanny olombelona, na avy hatrany na tsia.
Ny siansanny tany dia mahalala bolantany efatra, ny litôsfera, ny hidirôsfera, ny soson-drivotra ary ny biôsfera ; ireo bolantany efatra ireo dia mifandrify aminny vato, ny rano, ny rivotra ary ny fiainana.
Ny taranja siantifika lehibe mikasika ny tany dia ny jeografia, ny jeolojia, ny jeofizika ary ny jeodezia. Ireo taranja ireo dia mampiasa ny fizika, simia, biôlôjia, krônôlojia ary matematika mba hametraka ny taranja na fandrafetanny tany sy ny fahazoana azy tsara.
NatureWatch - Wiki for documenting biodiversity german